Cloud Computing - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Cloud Komputa Service
ICloud komputa ndiko kuwanikwa kwemacomputer services pamusoro peInternet. Aya masevhisi anotangira kubva padanho repamusoro zvigadzirwa kuti apedze SaaS (Software seSevhisi) mhinduro. Cloud sevhisi vanopa vanobatsira mabhizinesi kutarisisa pane avo epamoyo zviitiko nekubata zvese zvivakwa zvinodiwa. Nhasi, vanhu vazhinji vanokwanisa kuwana imwe nzira yegore mhinduro senge maemail, mitambo, mafirimu, mimhanzi, mifananidzo, zvinyorwa, unozvitumidza. Huwandu hwemasevhisi anowanikwa pagore hwakawanda. Cloud mhinduro dziri kukurumidza kuve sarudzo yakasarudzika yemabhizinesi ari kutarisa swathe yemakomputa zvinodiwa. Iri sevhisi rinoshanduka rakashandura gore komputa kuita mhinduro yakanaka kune ese mabhizinesi uye vanhu.
Kukosha kwe Cloud Computing Solutions
Cloud komputa inonyanya kuwanda, inochinjika uye inokwanisa kugadziriswa. Inoponesa makambani kubva mukudyara mari mukati meimba dzimba uye kuendesa mari iyi kugadzirisa nekukudza mabhizinesi avo. Cloud computing inobatsira mabhizinesi uye MNCs kudzikisira mari inowanikwa mukugadzirisa nekuvandudza zvivakwa zvavo zviripo zvekukura nekusimudzira. Makuru evashandi vegore vanounza pane-inoda komputa uye autoscaling. Izvi zvinogonesa vatengi kukwidza kumusoro kana kudzikisa pasi kwavo komputa zvinodiwa sezvazvinodiwa. Iyi yekubhadharira-se-iwe-enda yemitengo modhi inopa kwakakura kuchinjika uye inobatsira kupa kune epfupi epiki spikes mumabhizinesi.
Wona isiri-AMP vhezheni